डिआइजी नै नक्कली !!!!
काठमाडौं, माघ १९ - केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा दुई दिनअघि एक व्यक्तिले आमाबुवालाई कसैले अपहरण गरेको भन्दै उजुरी दिए । अपहरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले उनका केही कुरा सुने । अनि ब्युरो प्रमुख नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी) हेमन्त मल्लको कार्यकक्षमा लगे । मल्ललाई पनि ती व्यक्तिले आफ्नो कुरा सुनाए । तर प्रहरी अधिकृतसँग बाहिर निस्किएपछि उनले आश्चर्यजनक प्रश्न ती प्रहरी अधिकृतलाई सोधे 'के उहाँ नै हो त ब्युरो प्रमुख ?' ती अधिकारीले हो भनेपछि उनले दरबारमार्गमा सीआईबीको डीआईजी बताउनेलाई आफूले मुद्दा मिलाउन दुई लाख रुपैयाँ दिएको जानकारी दिए । उनले दरबारमार्गमा आफूले भेटेको डीआईजी र अहिले भेटेको व्यक्ति फरक परेको बताए । प्रहरी अचम्ममा परे ।
खासमा के भएछ के भने, दुई युवाले 'सीआईबी प्रमुखलगायत अन्यलाई चिनेको छु' भनेर चितवनका कृष्ण गौतमको मुद्दा मिलाइदिने भन्दै २ लाख ९० हजार रुपैयाँ झ्वाम पारेका रहेछन् । बेलायत बस्दै आएका चितवनका गौतम तीन महिनाअघि बिहे गर्न नेपाल आएका हुन् । भक्तपुर लोकन्थली बस्ने उनको बिहेको एक महिना नपुग्दै सम्बन्ध विच्छेद भयो । स…